Indawo yokuhlala ka-Mina-minpaku - I-Airbnb
Indawo yokuhlala ka-Mina-minpaku
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe ongu圭男
Uza kuqesha indawo ephezulu kwindlu yentsapho enye enegadi.Ngaphantsi kweekhilomitha eziyi-2 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe i-Echizen Mikuni, kukho iivenkile ezininzi ezifumaneka lula, iivenkile ezinkulu, iivenkile zeziyobisi, ii-izakayas, njl. kufutshane, kwaye kulula kakhulu.Ikufutshane nemizuzu eyi-20 xa uhamba ngeenyawo ukuya elwandle olukufutshane, kwaye malunga nemizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto usiya kwiindawo ezinomtsalane zabakhenkethi zaseTozai.
Siza kuqeshisa ngomgangatho wesibini wendlu esecaleni. Ingaphantsi kweekhilomitha eziyi-2 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe i-Echizen Mikuni, kukho iivenkile ezininzi ezithengisa izinto ezilula, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezithengisa izinto ezinkulu, iivenkile ezithengisa utywala, njl. kwindawo ekujikelezileyo kulula kakhulu. Ithatha malunga nemizuzu eyi-20 uhamba ngeenyawo ukuya elwandle olukufutshane, kwaye ikumgama wemizuzu eyi-10 ngemoto ukuya e-Tojibo eyindawo ethandwa ngabakhenkethi.
Imethi yeTatami ye-10 yegumbi leNtshona inebhedi elala abantu ababini enye, ibhedi elala umntu
omnye, kunye ne-6 tatami mat Japanese-style futon bed for 2 people.
Indawo yokubeka impahla,
i-veranda, indlu yangasese kunye negumbi leshawa zenzelwe ukusetyenziswa nguwe kuphela.
10 umatrasi we-tatami unebhedi elala abantu ababini eyi-1, ibhedi elala umntu omnye eyi-1
6 i-tatami-mat room I-futon yaseJapan izinto zokondlula abantu abayi-2
izindlu zangasese zeveranda kunye namagumbi eshawa ngawabathengi kuphela.
I-Mikuni-cho yidolophu encinci yezibuko ejongene noLwandle lwaseJapan. Inonxweme oluhle, kunye nezinto zokuzonwabisa ezifana neShiba Zhengliday, iEchizen Matsushima Aquarium, kunye neSikhephe iMikuni, kwaye ihlala ixhaphakile ngabakhenkethi.Ukongezelela, yimizuzu eyi-30 ukuya kwiMauoka Castle, eyona tempile indala eJapan, nemizuzu eyi-45 ukuya kwiTempile yaseNagahiraji eOmotoyama ngemoto ngemoto.
IOkocho, ilali enentwasahlobo eshushu, ekumgama wemizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto, ibe iOapobo neSangoku Onsen ikumgama wemizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto.
IMikuni Town yidolophu encinci yezibuko ejongene noLwandle lwaseJapan. Kukho iindawo ezininzi zokonwaba ezifana namapolisa aseShiba, iEchizen Matsushima aquarium, uhlanga lwezikhephe zamazwe amathathu, njl. kunye nemimandla emihle. Kwakhona, luhambo lwemizuzu eyi-30 oluya kwinqaba endala yaseMauoka, imizuzu eyi-45 ngemoto ukuya kwiTempile ye-Ohmotoyama Eihei.
Kukho idolophana enentwasahlobo eshushu 'Yukemuran Yokocho' ekumgama omalunga nemizuzu eyi-10 ngemoto, kunye ne-Mikuni Onsenbocho ekumgama omalunga nemizuzu eyi-5.
Ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya i-Komatsu, esikwiikhilomitha eziyi-35 ukusuka e-Komatsu - e-Shanghai, e-Komatsu - e-Taiwan kunye neenqwelo-moya ezininzi zasekhaya ziza kufika zize zihambe, ngoko nceda uzisebenzise xa ubuka i-Hokuriku.
Ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya i-Komatsu, ekwikhilomitha eziyi-35 ukusuka e-Komatsu ukuya e-Shanghai nase-Komatsu ukuya e-Taiwan, ngoko nceda uyisebenzisele ukubuka iindawo e-Hokuriku.
Umbuki zindwendwe ngu- 圭男
Inombolo yomthetho: M180007078